San Htun's Diary: March 2012
ဆရာမဂျူး၏ ကျွန်မ၏သစ်ပင် ဝထ္ထုထဲကလို နီနီဇော်၏ အုပ်စိုးဆိုသော သက်ရှိလူသား သစ်ပင်လေး မဟုတ်ခဲ့ပါ။ စန်းထွန်း၏ သစ်ပင်လေးကတော့ တကယ့်သစ်ပင်လေး ဖြစ်နေခဲ့သည်။
တိုရှီဘာ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကို NUS နဲ့NTU ကျောင်းသားကျောင်းသူများ ဆင်နွှဲကြမှာမို့ လို့လုပ်အားပေးလိုသူများ ဆက်သွယ်ကြရန်ဆိုတဲ့ အီးမေးလ်ရလာတော့ ကျောင်းပြီးလို့အလုပ်ရှာနေတုန်း ဖလမ်းဖလမ်းထဖို့အခွင့်အရေးပေါ်လာပြန်သည်။ မိစိမ့်၊ သော်သော်တို့ ကို အဖော်ညှိတော့ ဒီကောင်တွေက စိတ်မဝင်စား။ ကိုယ့်လို ဖလမ်းမလမ်းထချင်သူက မြန်မာမိန်ကလေးထဲမှာ အတော်မြင့်မားတဲ့ အရပ်ပိုင်ရှင် ၅ပေ၊ ၈ လက်မခန့်မော်ဒယ်လေးလို ပိန်သွယ်တဲ့ ရည်မွန်။ I am the most beautiful girl in the class. လို့သူ့team member Liang Yi ကို စရင် Liang Yi ကလည်း No. No. You are the tallest girl in the class. လို့ပြန်နောက်တတ်ပါတယ်။
၂၀၀၉ စက်တင်ဘာ ၂ တခုသော သောကြာနေ့ မှာ စာမေးပွဲကျင်းပရာ ခန်းမရှိသော၊ ဘောလုံးကွင်းဘေးနား၊ ရေကူးကန်ရှိသော၊ အားကစားလေ့ကျင့်ရာခန်းမကြီးရှိသော အဆောက်အအုံ (နာမည်မေ့နေသဖြင့်)နားတွင် တွေ့ ဆုံကြသည်။ တိုရှီဘာမှ တာဝန်ရှိသူ အမကြီးများမှ ကြိုဆိုကြသည်။ အင်္ကျီဆိုဒ်မေးသည်။ သူတို့ သည် NUS Alumnus များဟု ဆိုသည်။ လူစုံတော့ ထွက်ခွာသည်။ ၁နာရီလောက် မောင်းပြီးချိန် အနီရောင်လိုင်းဖက် ဘယ်နေရာမှန်း မှန်းဆ၍မရသော နေရာသို့ရောက်သည်။
တိုရှီဘာအင်္ကျီလဲရသည်။ Mangrove ခေါ် လမုတော ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပုံအကြောင်း ရှင်းပြသည်။ လမုတောသည် ကမ်းခြေတိုက်စားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသောကြောင့် အရေးကြီးသည်။ မှန်ပေသည် နေရာရှားပါးသည့် စင်္ကာပူကျွှန်းနိုင်ငံလေးအတွက် ဒီကိစ္စသည် အရေးပါသည်။ လမုတောသည် ဇီဝမျိုးစိတ်စုံ ရှင်သန်ကျက်စားသည်။ လမုပင်များသည် ရှင်သန်လွယ်သည်။ သို့ သော် လမုပင်များပြားပါကလည်း ဇီဝမျိုးစိတ်တချို့ ရှင်သန်ရေးအတွက် အခက်အခဲဖြစ်သည်။ သို့ ပါသောကြောင့် ရှိသင့်သော အရေအတွက်ထက် မပိုအောင် ထိန်းသိမ်းရသည်။ မူလတန်းကျောင်းသားလေးများ လေ့လာရေးခရီးစဉ်အတွက် ရှင်းပြပေးသော လုပ်အားပေးဂိုက် ရှိသည်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကို စိတ်ဝင်စားသူများ၊ ငှက်ကြည့်သူများ လာရောက်တတ်သည်။ သစ်တောထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ပုံများကို ဓာတ်ပုံများနှင့်တကွ အရွှန်းဖောက်ကာ ရှင်းသွားသည်မှာ ရယ်သံတအုန်းအုန်းနှင့် မပျင်းရ။
သည့်နောက်တော့ တိုရှီဘာမှ ကြေငြာဝင် အဲလေ တိုရှီဘာ ဂရင်းအကြောင်း ရှင်းပြသည်။ တိုရှီဘာမှ ပစ္စည်များကို လေထုထဲသို့ကာဘွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် နည်းနိုင်သမျှနည်းအောင် ကြိုးစားနေကြောင်း၊ တကမ္ဘာလုံးတွင် သစ်ပင်ဘယ်နှစ်သန်း စိုက်ပျိုးပြီးစီးကြောင်း၊ စင်္ကာပူတွင် ကိုယ်ပိုင် ပုဂ္ဂလိက ဒီလိုမျိုး လမုပင်စိုက်ဖို့မလွယ်ကြောင်း၊ အဖွဲ့ အစည်းဖြင့် စိုက်ပျိုးခွင့်ရသည်ကို ဂုဏ်ယူထိုက်သည်ဟု ရှင်းလင်းသည်ကို လက်ခုပ်သံတဖြောင်းဖြောင်းဖြင့် နိဂုံးချုပ်လိုက်သည်။
လက်အိတ်၊ ရွှံ့ ထဲစီးဖို့ဘွတ်ဖိနပ် လဲရသည်။ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပုံအကြောင်း သစ်တောအရာရှိများက ရှင်းပြသည်။ ကျောင်းသားများကို ကူညီရန် သစ်တောလုပ်သားကြီးများ ရှိသည်။ သုံးယောက်တဖွဲ့သစ်ပင်သုံးပင်စိုက်မည်ဟု ကြေငြာတော့ သုံးယောက်တဖွဲ့ဖွဲ့ ရန်အတွက် တယောက်လိုနေသည်။ တကောင်တည်း အဖော်မဲ့နေသော ဗီယက်နမ်အကိုကြီးခမျာ ကံထူးသွားသည်။
ရွှံ့ နွံဖြင့် စေးထန်းနေသော မြေသားကို တူးရသည်မှာ မလွယ်။ လူတရပ်ခန့် ရှိနေပြီဖြစ်သော သစ်ပင်ပေါက်၏ အမြစ် လွတ်လွတ်ကင်းကင်းဝင်ရန် အတော်လေး နက်နက်တူးရသည်။ လေးလံသော ပေါက်တူးကို တခါမကြည့်ရင်း ကိုယ့်အခြေအနေ သိသွားသည်။ ဗီယက်နမ်ကြီး တူးပြီး သစ်ပင်ထည့်သည့်အခါ မြေဖို့ ရုံသာ စွမ်းဆောင်နိုင်သည်။ တဖွဲ့ သုံးပင်စာအတွက် သုံးတွင်း တူးရမည်။
အာ ယူ အိုကေ
၂နာရီ ပူပြင်းသောနေပူချိန်အောက် နဖူးမှ ကျလာသော ချွှေးကို လက်ဖြင့်သုတ်လိုက်ရင်း ဗီယက်နမ်ကြီးမှ လက်နှစ်ချောင်းထောင်ကာ ပြန်ဖြေသည်။
သစ်တောလုပ်သားကြီးများမှ ဝိုင်းကူညီကြသည်။ မပြီးသေးသော အဖွဲ့ ကို ပြီးသူများက ကူညီကြသည်။ မျက်နှာတွင် ရွှံ့ ပေနေသော လူကိုကြည့်ပြီး ရယ်ကြသည်။ ပူပြင်းသော နေရောက်အောက်တွင် ကမ္ဘာမြေကြီး စိမ်းလန်းဖို့တတပ်တအား အားထုတ်နေကြသည်။ ပင်ပန်းသော်လည်း သူတို့ ပျော်ကြသည်။
အပြန်တွင် NTU ကျောင်းကို အရင်ပို့ သည်။ ကျောင်းပရဝုဏ် တော်တော်ကျယ်သည်။ ပထမဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးအကြိမ် ရောက်ဖူးခြင်း ဖြစ်သည်။
ဟိုင်းကြီးကျွှန်းသူဖြစ်သော ကျွန်မ ဒီရေတော၊ လမုတောတွင် ကြီးပြင်းခဲ့သည်။ လမုသီးများဖြင့် အိုးပုတ်တမ်းကစား၊ မီးဖိုချောင်းတွင် ထင်းအဖြစ် သုံးခဲ့သည်။ သို့ သော် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သင့်မှန်း တခါမှ အတွေးမဝင်ခဲ့သလို လမုပင် တပင်မှလည်း မစိုက်ပျိုးခဲ့။ စင်္ကာပူတွင် သစ်ပင်များဖြင့် စိမ်းလန်းသောမြို့တော်ဖြစ်ရမည်ဆိုသော ဆိုင်းဘုတ် မရှိ။ သို့ သော် နေရာကျဉ်းသော စင်္ကာပူသည် နေရာကျယ်သော ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်ထက် ပို၍ စိမ်းလန်းနေခဲ့သည်။ ကမ္ဘာမြေ၏ စိမ်းလန်းမှုကို လူသားများက ဖျက်ဆီးသည်။ ထိုအကျိုးဆက်အဖြစ် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကို ခံရသည်။
ကျွှန်မ၏ သစ်ပင်လေးသည် မြစ်ကမ်းပါးတိုက်စားမှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး လေထုထဲသို့ အောက်ဆီဂျင်ဓာတ် ထုတ်လွှတ်ကာ ကမ္ဘာမြေကြီး စိမ်းလန်းရေးအတွက် တတပ်တအားပါဝင်သည်ကို တွေးမိတိုင်း ကြည်နူးမိသည်။
မတ်လ ၂၄၊ ၂၀၁၂။
မျက်စိမမြင်သောသူသည် မမြင်သော်ငြား အသံကြား၍ စကားပြောနိုင်သည်။ စကားမပြောတတ်သော ကလေးသည် အသံကြားရ၍ ဝူးဝူးဝါးဝါး အသံများဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်သည်။ အကြားအာရုံချို့ တဲ့သောသူမှာကား မကြားရ၍ စကားလည်း မပြောနိုင်။ ဆေးရုံတွင် စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး သမီးလေး နားမကြားသည်ကို အတည်ပြုပေးလိုက်သောအခါတွင်ကား ကျွန်မရော၊ ကိုသက်ပါ ဆောက်တည်ရာမဲ့သွားခဲ့သည်။ မျက်ရည်ကာတာတံတိုင်း ကျိုးပေါက်သွားသည်။ ဝမ်းနည်းပူဆွေးရသည်မှာကား ဆိုဖွယ်ရာ မရှိတော့။
မေမေ နှစ်သက်သော စာသားလေး ပါးထားသည့် စာလေးတစောင် ကျွန်မရရှိခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ဟာ အမေတို့ ရဲ့အရည်အချင်းတွေကို စမ်းသပ်ချင်လို့အခက်အခဲတွေ၊ ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ အမေတို့ ဆီ ပို့ ပေးလိုက်တာ သားရဲ့ ၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်ကလဲ ဒါတွေရင်ဆိုင်ဖို့လက်နက်တွေ အမေတို့ မှာ တပ်ဆင်ပေးထားသေးတယ်။ မျှော်လင့်ချက်တို့ ၊ ယုံကြည်ချက်တို့ ၊ စိတ်ကူးအိမ်မက်တို့ ဆိုတာတွေပေါ့။ အဲဒါတွေ ရှိနေသမျှ ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူး။ အဲဒါတွေကို စွန့် ပစ်လိုက်ပြီဆိုတော့မှသာ အရာရာ ဆုံးရှုံးတာ။ အမေ့သား မှတ်ထား၊ သားဘဝတစ်လျှောက် သားရဲ့ မျှော်လင့်ချက်၊ ယုံကြည်ချက်တွေ၊ သားရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေကို ဘယ်အရာ ဘယ်ကိစ္စကြောင့်မှ မပျောက်ပျက် မဆုံးရှုံးစေနဲ့ သား။
အောင်မြင်ရေးအတွက် အဓိကသော့ချက်ဟာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အလျင်စလို မချမိအောင် ထိန်းနိုင်ခြင်းပဲ သား။ ပြသနာတခုကြုံရင် ပထမဆုံး သေသေချာချာ စဉ်းစား၊ ပြီးတော့မှ စိတ်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။
မေမေ့ဆီမှ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားများကို စာလေးထံမှတဆင့် ကျွန်မရရှိခဲ့သည်။ ကိုသက့်ဆရာများ၊ မိတ်သင်္ဂဟများထံမှ ရရှိသော သတင်းများကြောင့် အားတက်ရသည်။ ခေတ်မှီစမ်းသပ်ကိရိယာများနှင့် နားကြားကိရိယာတပ်၍ ရ၊ မရကို ဘန်ကောက်တွင် စမ်းသပ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး နားကြားကိရိယာ ထည့်၍ ရသည့်အခါတွင်တော့ ညီမလေးရှိသော စင်္ကာပူကို ကျွန်မတို့ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ငယ်သေး၍ နောင်၃လလောက်မှ ခွဲစိတ်သင့်သည်ဟု ဆရာဝန်အကြံပေးချက်အရ နောက်၃လ ကြာသောအခါ တခေါက် ထပ်ရောက်ခဲ့ပြန်သည်။ နားကြားစက်ကို ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရပုံကို မိဘများကိုပါ သင်တန်းပေးသည်။ ကလေး၏ နားကြီးထွားနှုန်း၊ အသံဖမ်းစက်ကို မူတည်ပြီး လိုအပ်သလို ခွဲစိတ်ရသည်။
ဘယ်လောက်ဝေးဝေးကြီး သွားရဦးမယ်ဆိုတာ မစဉ်းစားနဲ့ ။ ရှေ့ တမိုင်အတွက်ပဲ စဉ်းစား။ အဲဒါဆို သမီးတို့ရောက်လမ့်မယ်လို့မေမေ ယုံကြည်တယ်။ သမီးလေး ကျန်းမာဖို့ ၊ နားကြားစက် ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ၊ သမီးလေး စကားတခွန်း တတ်မြောက်ဖို့ ။ ဒါပဲ ကျွန်မတို့ခေါင်းထဲ ထည့်ထားသည်။ သည်လိုဖြင့် သူများကလေးတွေထက် နောက်ကျသော်ငြား မေမေဟု ခေါ်လာသည့် သမီးလေး၏ အသံလေးကို ကြည်နူးဝမ်းမြောက်စွာ နားထောင်ရင်း နောက်ဆုံးခရီးမိုင် ကျွန်မတို့ကျော်လွှားအောင်မြင်ခဲ့ကြသည်။
သမီးလေး၏ စကားသံသည် ကျွန်မတို့ အတွက်တော့ ဆည်းလည်းသံလေး ဖြစ်သည်။ စကားလုံးတွေ သင်ယူသည့်အရွယ်မှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို လေ့လာစူးစမ်းကာ မေးခွန်းလေးတွေ မေးလာသည်။ တခါတရံ ဖြေရခက်သော မေးခွန်းများ မေးလျှင်တော့ သမီးလေး ဆံပင်ကို ချစ်စနိုးဖွပြီး ကျွန်မ ရယ်မောခဲ့ရဖူးသည်။
သီတင်းကျွှတ်၊ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်များတွင် မေမေ့တို့ ဆီ ကျွန်မတို့ မိသားစု သွားလည်လေ့ရှိသည်။ ကျွန်မမေမေ တံမြက်စည်းလှည်းနေတုန်း သမီးလေးက ဘေးကနေကြည့်နေခဲ့သည်။ မေမေက ရုတ်တရက် တံမြက်စည်းထိုးပေးလိုက်သောအခါ
ဒီဒီ မလုပ်တတ်ဘူးဟု ငြင်းသည်။ မေမေက သမီးလေးကို တချက်စိုက်ကြည့်သည်။ ပြီးတော့မှ ဘယ်ဟုတ်မလဲ ကလေးရ၊ လှည်းကြည့်စမ်းပါ၊ တော်ကြာ ကလေးကျွှမ်းသွားမှာ။ ကိုယ်တကယ် မလုပ်ကြည့်သေးဘဲနဲ့ လုပ်မရဘူးလို့ ဘယ်တော့မှ မပြောနဲ့ ကွ။
တယောတီးသင်သောအခါ ဒီဒီသည် ညဏ်ကောင်းသော်လည်း အားနည်းချက်ရှိသည်။ ပျင်းရိခြင်း။ တတ်ပြီးသားသီချင်းတပုဒ်ကိုသာ တီးခတ်နေတတ်သည်။ အသစ်လေ့ကျင့်ရမှာကို ပျင်းလေသည်။ ဘွားအေဖြစ်သူ သိသောအခါ ဂီတတခုတည်းမှ မဟုတ်ဘူး။ လုပ်ငန်းမှန်သမျှ ဒီအတိုင်းပဲ။ တချို့ အပိုင်းတွေက လွယ်တယ်။ တချို့ အပိုင်းတွေက ခက်တယ်။ ဘယ်လုပ်ငန်းမှာမဆို တကယ်တမ်း အောင်မြင်ချင်ရင် ခက်တဲ့အပိုင်းတွေလည်း မလွှဲမရှောင်သာ လေ့ကျင့်ရလိမ့်မယ်ဟု ဆုံးမခဲ့သည်။
သမီးလေးကို အကောင်းဆုံး ကျွန်မတို့မျှော်လင့်ခဲ့ကြသော်လည်း သူ့ စွမ်းဆောင်ရည်ထက် ပိုမမျှော်လင့်မိအောင် ကျွန်မတို့ကြိုးပမ်းရသည်။ သမီးလေး၏ ညဏ်ရည်၊ လေ့လာအားထုတ်မှု၊ ဝါသနာကို မူတည်ကာ သူဖြစ်ချင်သည်ကိုသာ ကျွန်မတို့ထိန်းကျောင်းပေးခဲ့ရသည်။ ကျွန်မမေမေ ရန်ကုန်ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ဖြေဆိုခါနီး စိတ်လှုပ်ရှားနေသော သမီးလေးကို လူ့ ဘဝမှာ အရေးအကြီးဆုံးက ကလေး တကယ်လေ့လာတယ်၊ ကြိုးစားတယ်၊ ကိုယ်တတ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံး ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ကိုယ့်ဘာသာ လက်ခံဖို့ ပဲ။ အဲဒါဆိုရင် ကိစ္စတခုပြီးမြောက်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သဘော။ အဲဒါဟာ အရေးကြီးတယ်။ အောင်မြင်တယ်လို့ပြောကြတာ၊ သူတပါးတွေ ကိုယ့်ကို ချီးကျူးကြတာ၊ ဒါတွေလဲ ကောင်းပါတယ်။ အရသာရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိစ္စတခုပြီးမြောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်မှုလောက် တန်ဖိုးမရှိဘူး။ ကျေနပ်အားရစရာလဲ မကောင်းဘူး။ အဲဒီတော့ အောင်မြင်တယ် မအောင်မြင်တယ်ဆိုတာတွေ အသာဘေးဖယ်ထား၊ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကိုသာ အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားဟု ပြောခဲ့သည်။
သမီးလေးကို ညီမလေးတို့ ဆီမှာ ကျောင်းဆက်တက်ရန် စီစဉ်သောအခါ သူခင်တွယ်သော မိသားစု၊ သူငယ်ချင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခွဲရမည်စိုး၍ မေမေ ရက်စက်တယ်ဟု ငိုယိုခဲ့သည်။ သမီးလေး ဖေဖေ ဖျောင်းဖျပြောဆိုလျှင် သမီးလက်ခံမှာ မေမေ သိနေပါတယ် သမီးရယ်။ မေမေလည်း သိပ်ချစ်ရတဲ့သမီးလေးနှင့် မခွဲချင်ပါဘူး။ သမီးလေး နေထိုင်မကောင်းဖြစ်မှာ၊ စိတ်ပင်ပန်းမှာ၊ သူစိမ်းတွေအလယ်မှာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ရုန်းကန်ရမှာ မေမေ စိတ်ပူမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမီးဘဝတိုးတက်ဖို့ အတွက် မေမေ အားလုံးစတေးနိုင်ပါတယ်။
မေမေ့ဆီ ရောက်လျှင်တော့ ကျွန်မတို့မောင်နှမတွေ မြို့မှာ ကျောင်းတက်ကြတော့ မေမေရဲ့ ပူပင်သောကတွေကို မေးရင်း သမီးလေးအတွက် ကျွန်မ၏ စိုးရိမ်စိတ်၊ ပူပင်သောကတွေကို မေမေ့ကို ပြောပြဖြစ်မှာတော့ အသေအချာဖြစ်သည်။
(ဆရာဖေမြင့်၏ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ သေချာပြီလား၊ ဘဝ ဒသန ရသစာများ၊ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ စာအုပ်များမှ နှစ်သက်သော စာသားများကို ယူသုံးထားပါသည်။)
မတ် ၁၇၊ ၂၀၁၂။
မေ ကိုသက်ကို အရင်လို ချစ်သေးရဲ့ လားဟင်...
ကျွန်မရဲ့ဆိုင်ကလေးလောက် အချစ်က နေရာမပေးခံရလို့ ၊ အနေဝေးလို့သွေးအေးသွားပြီဟု အထင်ကိုယ်စီနှင့် ကျွန်မတို့ ကြားက သံယောဇဉ်ကြိုးလေး အနားလေးတွေ ဖွာနေပေမယ့် ခိုင်မြဲနေသေးသည်။
တနှစ်ကြာသောအခါ ရုံးတက်လက်မှတ်ထိုး၊ အိမ်တွင် သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းများကို ကျွေးမွှေးရင်း မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲ အကျဉ်းရုံးလေး ကျင်းပခဲ့သည်။ မင်္ဂလာလက်ဖွဲ့ ရငွေထဲမှ တချို့ ကို နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ မျက်မမြင်ကျောင်း၊ မိဘမဲ့ကလေးများပြုစုစောင့်ရှောက်သော မေတ္တာဝါဒီဘုန်းကြီးကျောင်းသို့လှုဒန်းခဲ့သည်။ မေမေကတော့ မင်္ဂလာပွဲခမ်းခမ်းနားနား ဖြစ်စေချင်သော်လည်း ကျွန်မတို့ ၏ ရွှေးချယ်မှုကို အလေးထားခဲ့သည်။ ကျွန်မတို့ မြို့လေးဆီ ကိုသက် ဆွေပြမျိုးပြ လိုက်လည်ခဲ့သည်။
ရိုးသားပွင့်လင်းသော၊ ဟန်ဆောင်မှုကင်းသော ကျေးလက်ကို မြို့သားကြီး ကိုသက် နှစ်သက်သွားခဲ့သည်။ ဝေးလံခေါင်သီသောဒေသက ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကို စောင့်ရှောက်မှုပေးချင်ခဲ့သည်မှာ သူ့ အိမ်မက်ဖြစ်သည်။ တခါတရံတွင် ဆန္ဒများနှင့် လက်တွေ့ က ကွာခြားနေတတ်သည်။ သို့ သော် အိမ်မက်များရှိနေသေးလျှင်တော့ တနေ့ နေ့ တွင် ထိုအိမ်မက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့အခွင့်အရေးများ ပေါ်လာတတ်သည်။
ကျွန်မတို့ နယ်သားလုံးလုံးဖြစ်နေသော ကိုအောင်နှင့် ကိုသက် ဆုံတွေ့ ခဲ့သည်။ တခါတလေ အတူတူငါးမျှား၊ ယမကာသောက်၊ သောင်ပြင် ဆိုင်ကယ်စီး၊ တောအုပ်ထဲ ကမ့်ထိုးပြီး စကားကောင်းနေတတ်သည်။ ခင်မင်ကြသောသူတို့ နှစ်ယောက်ကို မြင်ရတော့ ကျွန်မ စိတ်လက်ပေါ့ပါးသွားသည်။ မေသာ ကိုအောင့်ကို လက်ထပ်ခဲ့ရင် ခုဆို သူဋ္ဌေးမကြီး ဖြစ်နေမှာဟု ကိုသက်က စတတ်သလို ကိုသက်လည်း မေ့ကို လက်မထပ်ခဲ့ရင် ဘိလပ်သားကြီး ဖြစ်နေမှာဟု ကျွန်မကလည်း နောက်ပြောင်တတ်သည်။
ကျွန်မတို့ဘဝထဲသို့ကိုယ်ပွားလေး ဝင်ရောက်လာသည်ကို သိရသောနေ့ က ခံစားမှုများကို ကျွန်မ ဘယ်တော့မှ မေ့နိုင်တော့မည် မထင်ပါ။ သားလေးလား၊ သမီးလေးလား မသိရသေးခင်ကတည်းကပင် ကျွန်မ၏အတွေးများကို ကလေးကသာ စိုးမိုးထားခဲ့သည်။ ကျွန်မ အရမ်းကြိုက်သော အချဉ်၊ အစပ်များကို ကလေးထိခိုက်မည်စိုး၍ ရှောင်ကြဉ်ခဲ့သည်။ ကိုယ်တိုင်မိဘဖြစ်လာတော့မှ မိဘမေတ္တာ ဘယ်လောက်ထိကြီးမားမှန်း ကျွန်မ နားလည်သွားခဲ့သည်။ ဖေဖေနှင့် မေမေကို ကျွန်မ လက်ဆယ်ဖြာ ဦးထိပ်ထားကာ ရှိခိုးဦးချဖြစ်သည်။
ကျွန်မကတော့ ရိုးသားတည်ကြည်သော ကိုသက်ကိုယ်ပွားလေး လိုချင်သည်။ ကိုသက်ကတော့ ကျွန်မမေမေနှင့်တူသော ကိုယ်ပွားလေး လိုချင်သည်။ သမီးလေးမွေးသည့်နေ့ က ပျော်ရွှင်ကြည်နူးမှုနှင့် အတူ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ လွန်ဆွဲနေခဲ့သည်။ အင်္ဂလုမာလသုတ်ကို ကပြောင်းကပြန်ရွတ်နေသော ကိုသက့်ကို မြင်ရတော့ နာကျင်မှုကြားက ကျွန်မပြုံးမိသေးသည်။ ယောက်ျားဖောင်စီး၊ မိန်းမမီးနေဆိုသည့်အတိုင်း အသက်ကို အပေါင်ထားပြီးမှ သမီးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ ရှုမငြီးသည့် သမီးလေးကို ကြည့်မဝဖြစ်နေသည့် အသစ်စက်စက်ဖခင်လောင်း ကိုသက်ကပင် သက်နဒီမေဆိုသော နာမည်ပေးခဲ့သည်။
သမီးလေး ကျွန်မတို့ ဘဝထဲ ဝင်ရောက်လာသည့်အချိန်ကပင်စ၍ ကျွန်မဘဝ အဓိပ္ပာယ်၊ အားအင်များ
ပိုရှိလာခဲ့သည်။ အနီရောင်သွေးက မေတ္တာကြောင့် အရောင်ပြောင်းကာ နို့ ချိုအဖြစ် တိုက်ကျွေးနေချိန်များသည် မိခင်ဘဝအဖြစ် ကျေနပ်ရသောအချိန်များဖြစ်သည်။ မျက်စိရှေ့ မှာတင် သမီးလေး လေးဖက်သွား၊ မတ်တပ်ရပ် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။
တနေ့ဖေဖေ၊ မေမေနှင့် မောင်လေး ဆိုင်းမဆင့်ဗုံမဆင့် ရောက်ချလာသောအခါ ကျွန်မအံ့သြသွားရသည်။ ဖေဖေ့မျက်နှာအရိပ်အကဲကိုကြည့်၍ အခြေအနေမကောင်းဟု ထင်မိသည်။ ဖေဖေ၊ မေမေတို့ ကို တိုးတိုးတိတ်တိတ် မေးကြည့်သောအခါမှ မောင်လေးက မြို့က ကောင်မလေးတယောက်နှင့် ချိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်သည်။ ကောင်မလေးက သူဋ္ဌေးတယောက်၏တူမ။ သဘောမတူရသည့်အကြောင်းကို မေမေ့က ခုလို ရှင်းပြသည်။ သမီးသိတဲ့အတိုင်း မေမေတို့ က ဆင်းရဲတာ၊ ချမ်းသာတာထက် အကျင့်စာရိတ္တကို ပိုတန်ဖိုးထားတယ်။ ချမ်းသာတယ်၊ ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ ရှေးအတိတ်ကံ၊ ပါးနပ်လိမ္မာမှုနဲ့ဆိုင်တယ်။ ဟိုလူ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုက်၊ ဒီလူ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လိုက်၊ ဟိုလူနဲ့ ချိတ်တိတ်တိတ်၊ ဒီလူနဲ့ချိတ်တိတ်တိတ်။ ဒီလိုအကျင့်စာရိတ္တရှိတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ ဆိုရင်တော့ သူဋ္ဌေးသမီးဆိုဦးတော့ ဘယ်လိုမှ သဘောမတူနိုင်ဘူး။
ကြာရင် ညည်းမောင်ကို သုတ်ပြေးသွားမှာစိုးလို့ရန်ကုန်ကိုမလာတာ။ နယ်ကိုလုံးဝမပြန်ခိုင်းနဲ့ ။ မောင်လေး စွတ်မိုက်မည်လားဟု ကျွန်မစိတ်ပူမိသေးသည်။ မေမေ စိတ်မချမ်းသာအောင် မလုပ်ပါဟု မောင်လေးက မေမေ့ကို ကတိပေးခဲ့သည်။ မေမေ၏စကားကို ကျွန်မတို့မောင်နှမတွေ နာခံသည်ကတော့ မေမေ၏ အရည်အချင်းဖြစ်သည်။ မေမေ့ဆုံးဖြတ်ချက်သည် မှန်ကန်သည်ဟု စောဒကမတက်ဘဲ ကျွန်မတို့ တတွေ တညီတညွတ်တည်း လက်ခံနိုင်လောက်အောင် မေမေသည် ထက်မြက်ပြတ်သားသည်။
ကလေးချစ်တတ်သော မောင်လေးသည် ဒီဒီ၏ အချစ်ဆုံးဦးလေး ဖြစ်လာသည်။ ညီမလေး ဘွဲ့ နှင်းတက်ရောက်ရန် မေမေ၊ ဖေဖေ၊ မောင်လေးတို့နိုင်ငံခြားသွားရောက်ခဲ့သည်။ ပြန်လာသောအခါ မေမေက သမီးကြီးလည်း အခြေအနေပေးရင် နိုင်ငံခြားရောက်ဖူးအောင် လုပ်ဦး။ ဒါမှ သူများနိုင်ငံတိုးတက်တာ၊ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာ နမူနာယူရမယ်။ နွားခြေရာခွက်ထဲက ဖားက ခြေရာခွက်ထဲက ရေကိုပဲ ပင်လယ်လို့ထင်နေတာ။ တကယ့်ပင်လယ်ကို မြင်ဖူးတာ မဟုတ်ဘူး။ မေမေတို့ လည်း သူများနိုင်ငံတိုးတက်နေတယ်ဆိုတာ စလောင်းမှာ မြင်ဖူးနေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်တိုင်ရောက်တော့မှ ဘယ်လိုကွားခြားတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ မေမေ့စကားအတိုင်း တချိန်တွင် နိုင်ငံခြားကို ကျွန်မ ရောက်ဖူးခဲ့လေသည်။
ဒီဒီ သွားလေးတွေပေါက်၊ သွားဖုံးလေးတွေ ယားလျှင် သူ့ သွားသေးသေးလေးတွေနှင့်ကိုက်။ ဒီဒီဆီမှ မေမေဟု ခေါ်မည့်အသံကို ကျွန်မ မျှော်လင့်စောင့်စားနေခဲ့သည်။ မေမေဟု အရင်ခေါ်မည်လား၊ ဖေဖေဟု အရင်ခေါ်မည်လားဟု ကျွန်မနှင့် ကိုသက် သိချင်နေခဲ့သည်။ ထမင်းစားခန်းထဲ ကြွေပန်းကန်ပြား မတော်တဆ ကျကွဲသည့်နေ့ က ကျွန်မ၏ သံသယစိုးထိတ်မှုများကို တိကျသေချာသွားစေခဲ့သည်။ ကြွေပန်းကန်ပြား ကျကွဲသောအခါ ဒီဒီလန့် သွားမည်လားဟု စိုးရိမ်တကြီး လှည့်အကြည့် ဘာမှမဖြစ်သလို အဆော့မပျက်သည့် ဒီဒီ့ကို မြင်ရသည့်အခါ
ကို..ကို..ကိုသက်..ဒီ..ဒီဒီ မကြားဘူးနဲ့တူတယ်..
ထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့ မှုနှင့်အတူ မတ်တပ်ရပ်၍မရနိုင်အောင် ကျွန်မ တုန်ယင်သွားခဲ့သည်။
မတ်လ ၉၊ ၂၀၁၂။
မေမေ့စာထဲမှ တည်ငြိမ်ပြတ်သားမှုများ ကျွန်မကိုယ်ထဲ စီးဝင်သွားသည်။ ကိုအောင် ဖုန်းဆက်တိုင်း၊ အပြင်သွားလည်ဖို့ခေါ်တိုင်း၊ ကျွန်မဆီ လာတွေ့ တိုင်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြကာ ကျွန်မငြင်းတော့သည်။ ကောင်မလေးတွေ ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေသည့်သူတယောက်ကို ဘာမဟုတ်သည့်သာမာန်မိန်းကလေးတယောက်က ငြင်းတော့ ကိုအောင် ခံပြင်းပုံရသည်။ တခါတလေ ကိုအောင် သတိတရ ဖုန်းဆက်တတ်သည်။ ကျွန်မတို့အိမ်နားက ကာရာအိုကေဆိုင်ကို လာရင်း ကျွန်မကို သတိရလို့ဖုန်းဆက်သည်ဟု ဆိုသည်။ ကိုအောင့်သူငယ်ချင်းများ၏ ရယ်သံများ၊ ကောင်မလေးများ၏ ခိုးခိုးခစ်ခစ် ရယ်သံများကို ကြားရတော့ ကျွန်မကို သတိတရဖုန်းဆက်၍ ဝမ်းသာရမည်လား၊ ကာရာအိုကေကောင်မလေးများနှင့်ဆိုတော့ သဝန်များတိုရမည်လား။
အချစ်ဆိုသော ဓာတ်တမျိုး ကျွန်မဦးနှောက်ထဲ၌ ၂နှစ်တောင် ကြာရှည်လိုက်ဟန်မတူ။ ကျောင်းစာတဖက်၊ ပွဲရုံအကူ တဖက်၊ မေမေ့ဆိုင်အတွက် ပစ္စည်းအဝယ်တော်တာဝန်များနှင့် မီးဝေးသော ချိပ်ပမာ ကျွန်မ၏အချစ်ချိပ်ကလေး တင်းမာသွားခဲ့သည်။ ပုလင်းထောင်လွန်း၍ အစာအိမ်သွေးကြောပေါက်သွားသည့် ကိုအောင့်ဆီ လူမမာသတင်းသွားမေးရဖူးသည်။ မေမေပြောပြဖူးသော ကျွန်မတို့ဆွေမျိုးမကင်းသည့် ဘကြီးအောင်အကြောင်း သတိရမိသည်။ ဘကြီးအောင် အရက်နဲ့ကြီးတော်ခင် (ဘကြီးအောင် ကတော်) ဘာဖြတ်မလဲ မေးလျှင် အရက်တော့ ဖြတ်နိုင်ဘူးအေ။ ညည်းတို့ ကြီးတော်ပဲ ဖြတ်မည်ဆိုသောကြောင့် ကျွန်မတို့ဆွေမျိုးများအကြား ရယ်စရာဟာသတပုဒ် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကိုအောင့်ကိုတော့ အရက်နဲ့ ကျွန်မ ဘယ်ဖြတ်မလဲမေးလျှင် ကျွန်မကို ဖြတ်မည်ဆိုတာ သေချာသောကြောင့် ကျွန်မမေးမြန်းဖို့သတ္တိမရှိပါ။